Vontovorona: Mitokona ny mpianatra politekinika
lundi, 09 juillet 2018 09:30
Efa tsy an-tenda intsony ny rano, fa efa difotra tanteraka ireo mpianatra sy mpampianatra eny amin'ny sekoly ambony Politekinika, ka dia tsy tana intsony fa nitokona ireo mpianatra anarivony eny Vontovorona.
Ankoatran'ny resaka bourse, karaman'ny mpampianatra, sy ny faharatsian'ny fitaovam-pampianarana dia tranga hafa naterak'ity resaka LMD ity no napitroatra ny maro.
Voalaza tokoa mantsy fa dia misy diploma takiana ho an'ireo mpampianatra afaka mampianatra isan'ambaratongany, ary indrindra mila mpampianatra manana diploma ambony no afaka manao encadrement mémoire.
Ny mpampianatra anefa tsy ampy, ny fanjakana tsy mandefa ny mpampianatra hiofana, ireo manana diploma tsy omena tambi-karama amboniny.
Mpampianatra iray tsy mahazo mitana mpianatra mihoatra ny 4 raha hanao mémoire, nefa ny Politeknika Vontovorona fotsiny no efa misy mpianatra 5è année, eo amin'ny 800 hanomana mémoire. Lasa kolikoly ny hiafarany, dia iandry firy taona izany vao ho vita ny mémoire raha mpianatra vitsy ihany no afaka hanao izany?
Hianatra, nefa ho aiza hoy ireto mpianatra marobe ireto raha tonga amin'ny dingana farany nefa tsy ahazo diploma?